Elementor: Onye nchịkọta akụkọ magburu onwe ya maka ịsepụta Mara mma WordPress peeji na posts | Martech Zone
N'ehihie a, m were awa ole na ole wee wuo saịtị mbụ m na-eji Elementor. Ọ bụrụ na ị nọ na ụlọ ọrụ WordPress, ọ ga-abụrịrị na ị nụla mkpọtụ banyere Elementor, ha ka kụrụ nrụnye 2 nde! Enyi m Andrew, onye na-arụ ọrụ Ndị mmekọ NetGain, gwara m banyere ngwa mgbakwunye na azụgoro m ikike na-akparaghị ókè iji mejuputa ya ebe niile!
WordPress nọ na-enwe mmetụta okpomọkụ na ike ya na-arụ ọrụ obi ọjọọ. Ha na-emelite na Gutenberg n'oge na-adịbeghị anya, nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ nke na-enye ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ… ma ọ dịghị ebe dị nso na ndị ọzọ akwụ ụgwọ na ahịa. Na eziokwu niile, enwere m olileanya na ha ga-azụta otu n'ime ngwa mgbakwunye ndị a toro eto.
N'ime afọ ole na ole gara aga, anọ m na-eji Avada maka ndị ahịa m niile. A wuru isiokwu ahụ n'ụzọ dị mma, na-eji nchikota nke isiokwu na ngwa mgbakwunye iji kwado ikike ịhazi. A na-akwado ya nke ọma ma nwee ụfọdụ ihe dị egwu na-achọbu mmepe ma ọ bụ ịzụta.
Elementor dị iche n'ihi na ọ bụ naanị ngwa mgbakwunye ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na isiokwu ọ bụla. Na saịtị nke m wuru maka onye ahịa a taa, m na-eji isi isiokwu nke ndị Elementor na-atụ aro, Elementor Ndewo Okwu.
Enwere m ike ịmepụta saịtị na-anabata ihe nke ọma na menu na-adọrọ adọrọ, mpaghara ụkwụ, peeji nke ọdịda ahaziri, yana ụdị mbanye… site na igbe ahụ. O were obere oge iji mee ka ndị isi Elementor mee ihe, mana ozugbo m ghọtara templating, ikike ngalaba, na ihe ndị dị na ya, enwere m ike ịdọrọ na dobe saịtị ahụ niile n'ime nkeji ole na ole. Ọ zọpụtara m ụbọchị nke oge na enweghị m idezi otu akara koodu ma ọ bụ CSS!
WordPress Popup Publishing Rules na Designs
Ọ naghị abụkarị ngwa mgbakwunye na-enwe ike dị egwu dị otú ahụ, mana na Elementor, ị nwere ike ịtọ ọnọdụ, ihe na-eweta, yana iwu dị elu maka otu ị chọrọ popups bipụta… niile na ntanetị dị mfe:
The mmebe bụ nnọọ phenomenal, na ha ọbụna na-enye ụfọdụ anya-na shelf atụ ka ị chepụta!
Na mgbakwunye na Ọrụ Mmapụta, Akụ Azụmaahịa Gụnyere
Njikọ njikọ - Mfe jikọọ na ndị na-ege gị ntị site na WhatsApp, Waze, Kalịnda Google & ngwa ndị ọzọ
Ndenye ngwaọrụ - Mee ka echiche nke ịdị ngwa dịkwuo mkpa site na ịtinye ngụda ngụ oge na onyinye gị.
Wdị ngwaọrụ - Goodbye azụ! Mepụta ụdị gị niile dị ndụ, site n'aka onye nchịkọta akụkọ Elementor.
Ibe ọdịda -Creatmepụta na ijikwa peeji nke ọdịda adịtụbeghị mfe, niile n'ime ebe nrụọrụ weebụ WordPress gị ugbu a.
Ntinye Star Wijetị - Tinye ụfọdụ ihe na-elekọta mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ gị site na itinye akara kpakpando na ịmepụta ya na mmasị gị.
Akaụntụ Carousel Wijim - Mee ka azụmaahịa gị 'na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ịtinye mgbagha ịgba ama nke ndị ahịa gị na-akwado.
Mmachi nke Elementor
Ọ bụghị ngwa mgbakwunye zuru oke. Ejirila m oke ole ị kwesịrị ịghọta:
Omenala Post Types - Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwe ụdị akwụkwọ Omenala na saịtị Elementor gị, ịnweghị ike iji Elementor Editor mee ụdị ụdị post ahụ. Otu usoro ọrụ maka nke a bụ iji edemede edemede iji chịkwaa saịtị ahụ niile.
Akaụntụ Blog - Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịme peeji ebe obibi blọọgụ mara mma na Elementor, ị nweghị ike ịkọwa peeji ahụ na ntọala WordPress gị! Ọ bụrụ na ịmee, peeji Elementor gị ga-agbaji. Nke a bụ ezigbo nsogbu na-ewe m ọtụtụ awa iji chọpụta. Ozugbo m setịpụrụ ibe blog na nke ọ bụla, ihe niile na-aga nke ọma. Nke ahụ bụ bummer, ọ bụ ezie na a na-eji ntọala peeji blog eme ihe n'ọtụtụ ọrụ WordPress template. Ọ gaghị egbochi saịtị gị n'ụzọ ọ bụla, ọ bụ naanị okwu dị ịtụnanya.
Lightbox Nkwado - Njirimara ahụ dị mma, mana ikike ịmepe bọtịnụ mepee igbe ọkụ iji hụ ebe ngosi ma ọ bụ vidiyo adịghị ebe ahụ. Agbanyeghị, enwere ihe dị egwu Tinye-On dị mkpa nke na-enye atụmatụ a yana ọtụtụ ndị ọzọ.
Y’oburu n’inwe ihe mmekorita n’ime WordPress, imata otu osi sie ike. Ọfọn, Elementor nwere njikọ chiri anya na Mailchimp, ActiveCampaign, ConvertKit, Mgbasa Ozi Nyocha, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack na Discord!
Lelee Atụmatụ Elementor niile
Na-agbatị Elementor na atụmatụ ndị ọzọ!
Ultons Addons bụ ọbá akwụkwọ na-etolite etolite nke ezigbo wijetị Elementor nke mepere ụdị ohere imepụta ọhụụ maka gị. Ihe ngwugwu a di egwu:
Wijetị & Ndọtị - Ọbá akwụkwọ na-eto eto nke 40 + wijetị Elementor pụrụ iche nke na-ewe ikike imewe gị na ọkwa ọhụrụ!
Saịtị websaịtị - N'ime 100 nke a haziri nke ọma na nke websaịtị na --emepụta ihe ga - eme ka ọ rụọ ọrụ gị ọsọ ọsọ.
Nkanka Nkebi - Karịrị 200 tupu-ewu ngalaba ngalaba na-nanị dọkpụụrụ, ama esịn, na ahaziri, na-enye gị na peeji nke a pụrụ iche imewe na ole na ole clicks.
Ma ị bụ ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ onye ọhụụ, ị ga-agba ọsọ ọsọ gị ma nweta atụmatụ dị iche iche n'ụzọ zuru ezu.
Ngosipụta: M ji nganga na-eji njikọ njikọ m na edemede a!
Tags: elementorelementor tinye-onselementor na ndebirielementor wijetịewu ewu wordpress ngwa mgbakwunyenchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọwordpress peeji nke mmebewordpress peeji nke editọwordpress plugin